Samacharpati Samacharpati – A Complete News Portal From Pokhara
मेडिकल कलेज स्थापना सरकारको प्राथमिकतामा छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल
प्रमुख सचिव डा. रेग्मीको बिदाइ
स्याङ्जा, १० मङ्सिर । नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजबाट चितवनमा शुरु हुँदैछ । महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह नारायणगढस्थित नारायणी नदी किनारमा हुनेछ । बिहानैदेखि नारायणगढ क्षेत्रमा कार्यकर्ताको चहलपहल रहेकाे छ । अहिले विभिन्न स्थानबाट जुलूस निकाल्ने तयारी रहेकाे छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि एमाले फेदिखाेला गाउँपालिका कमिटी काे चितवन यात्रा शुरू भएकाे छ । नारायणी नदी किनारमा पुगेर उदघाटन समारोहमा परिणत हुने छ ।
विश्व किर्तिमानी लेखक डा उपाध्यायले ल्याए १२ औं उपन्यास ”मेरी प्रिया”
अनाथ बालबालिका सहयोगार्थ कार्यक्रममा “भिटेन” दाङ जादै
रकमान्तरको विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारको स्पष्टोक्ति
मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाको सपथ
पोखराबाट उदाएका किरण श्रेष्ठ : फुटबल भनेपछि हुरुक्कै
माइक्रोसफ्ट कम्पनीको बजार मूल्य २० खर्ब डलर नाघ्यो
माइक्रोसफ्टले ल्यायो विन्डोज ११, डेस्कटपमै ५ लाख एन्ड्रोइड एप चलाउन सकिने
हिन्दु धर्म सम्बन्धी मेरो बुझाई र आधुनिक समाजमा कसरी अपनाउने ?
संसदले अर्को प्रधानमन्त्री छान्न पाउने कि नपाउने ?
सबैको माया र विश्वासले नै नेलम्बो नेपाललाई यहाँसम्म ल्याएको हो, थप काम गर्न हौसिएका छौँ : अध्यक्ष देवकोटा
सुनिता कार्की ,स्याङजा, २६ असाेज । दसैँकाे छैठाैँ दिन आज स्याँङजा जिल्ला फेदिखाेला गाँउपालिका स्थित नुवाकाेटमा रहेकाे धार्मिक , एैतिहासिक...
के तपाईंको पनि निद्रा विथोलिएको छ ?
घाटी दुखेको मात्र नभइ अन्य रोगका लागि पनि अति लाभदायक लिची
ग्याँष्टिक,मधुमेहदेखी मुटुसम्वन्धी रोगीले यि कुरा खाँदा अति उत्तम
१. मुख्यमन्त्री पोखरेल गृहजिल्ला भ्रमणमा
२. स्याङ्जा र गोरखामा डेल्टा भेरियन्ट भेटियो
३. गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रीले जिम्मेवारी पाए
४. सन् २०२१ सम्म सबै नेपालीलाई काेभिड खोप लगाउँछौंः प्रधानमन्त्री
५. २८ वर्षपछि अर्जेन्टिनाले जित्यो कोपा अमेरिकाको उपाधि
६. अस्ट्रेलियासँगको पहिलो टी–ट्वान्टी क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिज १८ रनले विजयी
काठमान्डाैँ, ९ मङ्सिर । नेपाली ब्याडमिन्टनको ईतिहासमा नयाँ आयामको थालनी भएको छ । काठमाण्डौँ ब्याडमिन्टन एकेडेमीले ब्याडमिन्टन खेलको प्रर्वधन गर्ने लक्ष अनुरुप राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई कर्पोरेट हाउसहरुसंग जोड्दै नयाँ आयामको सुरुवात गरेको हो । एकेडेमीले पुष ६ देखि ९ गते सम्म त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्डहलमा आयोजना गर्ने कुमारी बैंक काठमाण्डौ टिम च्यामिपयनसिप २०२१ [...]
अन्तर्राष्ट्रिय अम्पायर थापालाई टेक्निकल टिमको बिदाई
साहित्यिक चौतारी नेपालको जापानकाे अध्यक्षमा बिन्दा पराजुली बराल चयन
साहित्यिक चौतारी नेपाल जापान शाखा गठन गरिएको छ । विन्दा पराजुली बरालको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिको उपाध्यक्षमा अमरदेब बास्तोला एवं [...]
बाल आइसियु बनाउन गैरआवासीय नेपालीको सहयोग
“किन हटेनन् अझै बिभेदहरु ?”
डा.उपाध्यायको द्धारा लिखित उपन्यास ‘कफी लभ’ लोर्कापण
७ वर्षको विश्व चर्चित मुसा मागावाले पायो अवकाश, जसले गर्यो यस्ता चामत्कारिक काम
दक्षिण अफ्रिकामा एक महिलाले जन्माईन् १० सन्तान
अनौठो शहर जहाँ १९ रुपैयाँमा नै घर किन्न पाइन, १७ वटा घर बिक्री भइसके
लामो समय खाना खान नपाएको सर्पले आँफैलाई खायो, हेर्नुहोस् भिडियो
रहेनन् ३९ पत्नी र २ सय सन्तानका अविभावक, चार तल्ले विशाल घरमा अटेका थिए सबै
भिडियो बनाउन गएका युवाको भयो रामधुलाई , प्रयांक गरेको भन्दा पनि छाडेनन पाए धोबीधुलाई (भिडियो)
काठमाडौं, २२ असाेज । युवा पुस्ताकी चर्चित गायिका अस्मिता अधिकारी र गायकअभिनय निरौलाको युगल गायनमा समावेश हुन्न नभनुको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। गीतलाई स्वयम् गायक निरौलाले लेखेका हुन्। योगेन्द्र उपाध्यायले संगीतवद्द गरेको यस गीतलाई सुवाश जोशीले संगीत संयोजन गरेका हुन्। रोमाण्टिक भर्सनको यस गीतमा सायरीको प्रयोग समेत गरिएको छ। अस्ट्रेलियामा छायांकन गरिएको भिडियोमा स्वयंम गायक निरौला र रन्जना तिमल्सिना [...]
काठमाडौँ, २२ असाेज । करिव ६ महिना अघि ''किन होला'' बोलको मेलोडियस भर्सनको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका गायक चन्द्र लावारले दशैँ तिहारको कोशेली स्वरूप ''एकै नजर'' बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्। प्रेमिल शैलीको गीतमा युवा प्रेम र आकर्षणलाई व्यक्त गरिएको छ। गीतमा शब्द गोपाल क्षेत्रीको रहेको छ भने संगीत नताशाको रहेको छ। यस गीतलाई साहिदले संगीत संयोजन गरेका हुन्। [...]
काठमाडौं, १६ असाेज । करिव ५ महिना अघि ''निलो कुर्ताले'' बोलको गीत सार्वजनिक गरेर चर्चा कमाउन सफल गायक लोक पौडेल र गायिका मेलिना राई फेरि एकसाथ नयाँ म्युजिक भिडियो ''बेरुवाको औंठी'' लिएर आएका छन्। यस गीतमा चर्चित संगीतकार दिपक शर्माको शब्द, संगीत रहेको छ। नरेन्द्र वियोगीले गीतलाई संगीत संयोजन गरेका हुन्। अनिल के मानन्धरले छायांकन गरेको भिडियोमा गायक प्रकाश सपुत [...]
नेपाली सुगम संगीतमा राम्रो मानिएकी गायिका समिक्षा अधिकारीको स्वरमा रहेको “यो भाग्यमा” गीतको भिडियो डिजिटल बजारमा सार्वजनिक भएको छ । सो गीतमा समिक्षालाई पारदर्शी खरेलले साथ दिएका छन । माया र प्रेमको भावलाई गीतमा चित्रण गरिएको छ । प्रेमील प्रेमी प्रेमीका विचको प्रेम प्रसङ्घलाई गीतमा समावेश गरिएको छ । जनक विवस न्यौपानेको शब्द तथा संगीत र राजु कार्कीको एरेन्ज गीतमा [...]
यतिबेला तीजमय बन्दै गएको छ नेपाली संगीत बजार । बजारमा धेरै सर्जकले आफ्नो तीज गीत दर्शक स्रोता माझ पठाइसकेका छन र अधिकाशं गीत सफल पनि भएका छन । माया, प्रेम, दु:ख, वेदनाका गीत पनि बजारमा उकालो लागिरहेका छन् । रमाईला, नचाउने किसीमका गीतहरु पनि बजारमा आईरहेका छन् । तर केही सर्जकहरुका मौलीक गीतहरुले भने संस्कृतीको जगेर्नार्थ सहयोग पुगेको पाउन सकिन्छ [...]
नेपाली सांगित बजार यतिबेला तीजमय बन्दै गएको छ । बजारमा धेरै सर्जकले आफ्नो तीज गीत दर्शक स्रोता माझ पठाइसकेका छन र अधिकाशं गीत सफल पनि भएका छन । माया, प्रेम, दु:ख, वेदनाका गीत पनि बजारमा उकालो लागिरहेका छन् । रमाईला, नचाउने किसीमका गीतहरु पनि बजारमा आईरहेका छन् । तर केही सर्जकहरुका मौलीक गीतहरुले भने संस्कृतीको जगेर्नार्थ सहयोग पुगेको पाउन सकिन्छ [...]
गौरव र बिमलाको ‘जति चोट सहेनी’ सार्वजनिक
हाल क्यानाडामा बस्दै आएका गीतकार एवं सिनेमा निर्माता राजेन्द्र चोङवाङ्गको लेखन एवं ममता गुरुङको आवाज रहेको गीत जति चोट सहेनी सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा संगीत एवं एरेन्ज बादल लिम्बुको रहेको छ । यस गीतको भिडियो पूर्वी नेपालका रमणिय स्थानहरुमा छायांकन गरिएको छ । यस गीतमा गौरव पहाडी र बिमला खजुमको अभिनय देख्न सकिन्छ भने निर्देशन उदय सुव्वाको रहेको [...]
गायक तथा सर्जक गोबिन्द चापागाईको ‘रातो सारीले’ सार्बजनिक
गायक तथा सर्जक गोबिन्द चापागाई र रुपा वडाको नयाँ तीज गीत ‘रातो सारीले’ सार्बजनिक भएको छ । घनश्याम रिजालको युट्यूबमा अपलोड गरिएको गीतको शब्द तथा लय रिजालकै रहेको छ । श्रीमतीलाई यो बर्ष कोरोनाको कारण रानीहार, नयाँ सारी किन्न नसकिएको र पोहोरकै सारीले टारिएको कुरा गीतमा सुन्न र हेर्न सकिन्छ । गीतको म्यूजिक भिडियो होम गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् भने [...]
गीतकार बिष्ण बिरहीको शब्दमा साँझ ढलिरहेथ्यो सार्वजनिक
गीतकार बिष्ण बिरहीको शब्दमा साँझ ढलिरहेथ्यो सार्वजनिक भएको छ। स्याड भर्सनको यो गीतमा संगीतकार बसन्त सापकोटाको संगीत र चर्चित गायक प्रमोद खरेलको स्वर सुन्न सकिन्छ। हाल लिरिकल भिडियो सार्वजनिक भएको गीतको म्युजिक भिडियो समेत चाडै बजारमा ल्याउने तयारीमा गीतकार बिरही रहेकी छिन। उनले हाल सम्म तिन वोटा एल्बम बजारमा ल्याईसकेकी छिन भने सार्वजनिक एल्बममा एक दर्जन बढी गीतहरु समाबेस रहेका [...]
आयो तिम्रै राजामा “यसराज र सरिता बेहुला बेहुली”
काठमाडौं, नवोदित गायक गणेश थापाको स्वरमा नयाँ गीत आयो तिम्रो राजाको भिडियो सोमबार रिलिज भएको छ । यो गीतको भिडियोलाई बुढासुब्बा डिजिटलबाट रिलिज गरिएको हो । रोमान्टिक शैलीको यो आधुनिक गीत नृत्य प्रधान रहेको छ । गीतमा सुवर्ण कुमार श्रेष्ठको संगीत र संगीत संयोजन छ । गीतलाई सुदन लुईंटेलले लेखेका हुन् । यो गीतको भिडियो पनि नृत्य प्रधान र आकर्षक [...]
स्याङ्जा, १० मङ्सिर । नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजबाट चितवनमा शुरु हुँदैछ । महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह नारायणगढस्थित नारायणी नदी किनारमा हुनेछ । बिहानैदेखि नारायणगढ क्षेत्रमा कार्यकर्ताको चहलपहल रहेकाे छ । अहिले विभिन्न स्थानबाट जुलूस निकाल्ने तयारी रहेकाे छ । महाधिवेशनमा [...]
मनमोहक जैदिको हात्ती ढुङ्गा
बागलुङ जैमिनी नगरपालिका ,वडा न ७ जैदि , नागढुङ्गामा रहेको हात्ती ढुङ्गा । केही समय अगाडि मात्र पहिचान गरिएको उक्त ढुङ्गाको यतिबेला भने पर्यटकिय गन्तब्य बन्दै गएको छ । भिरालो डाडामा ढुङ्गाका बथानहरु छ्न । तिनै बथानमा एउटा एस्तो ढुङ्गा [...]
तालचोक बेगनास सडकलाइ नेपालकै नमूना सडक बनाइने
पोखरा, ११ असार । पोखरा महानगरपालिकाले महानगरको गहनाको रुपमा रहेको बेगनासताललाई पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्ने तालचोक बेगनास सडक नेपालकै नमूना सडकको रुपमा निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जु देवी गुरुङले नेपाल [...]
टिआर शाही, सल्यान । सल्यान सदरमुकाम देखि एक डेढ घण्टाको गाडी यात्रा पछि पुगिन्छ वागचौर नगरपालीकाको थारमारे वजार । उसो त सल्यानको सदरमुकाम पछि व्यापारीक,राजनितीक र शैक्षिक हिसावले प्रमुख केन्द्रपनी हो थारमारे वजार । राप्ति राजमार्गले विचवाटै चिरेर गएको भएर [...]
सुम्सा फाटको झरना
बागलुङको दक्षिण भेग जैमिनी नगरपालिका ,वडा न ६ अर्जेवा र वडा न ७ जैदीको सङगमस्थल सुम्सा फाटको पहारामा झरेको झरनाको मनोरम दृश्य ।
मुस्कान खातुनलाई प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार प्रदान गरिने
काठ्माण्डाै । एसिड आक्रमण विरुद्धकी अभियन्ता मुस्कान खातुनलाई प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यस वर्षको पुरस्कार खातुनलाई दिने निर्णय गरेको नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । तेजाब हमला अन्त्यतर्फ लक्षित उनको [...]